ब्लग र संसाधन केन्द्र - किम्रोय बेली समूह
ब्लग र संसाधन केन्द्रकिमरोय बेली2020-04-11T20:23:54-05:00
आज सिक्ने सुरू गर्नुहोस्
कदम सोलार द्वारा कदम # १ अनलाइन कोर्स कसरी आत्मविश्वासमा सौर प्रणाली स्थापना गर्ने सिक्नको लागि अहिले सोलर सिक्न सुरु गर्नुहोस्
ट्रट बेली विश्वविद्यालय बहुमुखी बहु अरबपति बनाउने ट्रोट बेली विश्वविद्यालयको भ्रमण गर्नुहोस्
सौर स्थापना कोर्स
प्रणाली साइजिंग यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले आफ्नो सौर्य प्रणाली ओभरराइज गर्नुभएको छैन सौर्य भिडियो हेर्नुहोस् रास्ता रोबोट तपाईंको अर्को घटनालाई एक अविस्मरणीय बनाउनुहोस् घटना प्याकेजहरू हेर्नुहोस्
विश्व # 1 शिक्षा रोबोट
RASTA ROBOT एक शुरुआतबाट रोबोटिक्स प्रोफेशनलमा जानुहोस् रास्ता रोबोट भिडियो हेर्नुहोस् होटल सौर्य भिडियो हेर्नुहोस् परिवार भिडियोहरू हेर्नुहोस्
हाम्रो ग्लोबल उर्जा दर्शन के तपाईं हावाको स्वामित्व लिन सक्नुहुन्छ? तपाईं यो किन्न सक्नुहुन्छ? के यो केवल छानिएका देशहरूमा उडाउँछ? के हावा केवल अरब राज्यहरूको लिगमा बसन्छ? ऊर्जा सूचना संघका अनुसार, विश्वको of%% तेल संयुक्त राज्य अमेरिका, साउदी अरेबिया, रुस र […] सहित १० राष्ट्रले उत्पादन गर्दछ।
सौर ग्राहक परामर्श शीर्षक कभर गर्न
सौर्य ऊर्जा अझै पनि धेरै व्यक्तिहरूको लागि नयाँ नयाँ अवधारणा हो। एक सम्भावित ग्राहकसँग धेरै प्रश्नहरू हुन्छन् ताकि तपाईं उनीहरूको सबै प्रश्नहरूको आत्मविश्वासपूर्वक जवाफ दिनको लागि तयार हुनुपर्छ। एक परामर्श समयमा एक राम्रो पहिलो प्रभाव तपाईं एक प्रतिस्पर्धी माथि रोजगार प्राप्त बीचको भिन्नता हुन सक्छ। यसैले यहाँ केही सुझावहरू छन् […]
Small सौर शुरुवात चेकलिस्ट आईटमहरू सौर सौर स्थापनाकर्ताहरूको लागि
जब मैले किम्रोइ बेली नवीकरणीय संस्थामा मेरो सौर स्थापना व्यवसाय सुरु गरें भने म चाहन्थें कि मँ चीजहरूको एक सूचि छ जुन ठाउँमा हुनुपर्दछ दाहिने खुट्टामा शुरू गर्न। मैले यो लेख लेखें र सौर्य स्थापनाकर्ताहरूलाई दायाँ खुट्टामा प्रक्षेपण गर्न मद्दतको लागि स्टेप बाय स्टेप सोलर कोर्स सिर्जना गर्‍यो। त्यहाँ […]
शुरुआतीहरूको लागि सौर स्थापनाकर्ता मार्केटिंग रणनीतिहरू
त्यसोभए तपाईसँग बहु-अरब डलर सौर्य उद्योगबाट केहि गम्भीर पैसा कमाउने भव्य धारणा छ तर तपाईंसँग पहिलो ग्राहक छैन। तपाई कहाँबाट सुरू गर्नुहुन्छ? तपाईं के भन्नुहुन्छ? तपाईं कसरी घरमालिकलाई उनीहरूको घरमा सौर्य शक्ति थप्नको लागि विश्वास गर्न र उनीहरूको पैसाको साथ अझ महत्त्वपूर्ण कुरा विश्वास गर्नुहुन्छ? यदि […]
शीर्ष So सौर त्रुटिहरू सौर स्थापनाकर्ताहरूद्वारा बनाइएको
मेरा सौर स्थापनाहरूको पाँच वर्षमा मैले किम्रोइ बेली नवीकरणयोग्यहरूमा सौर स्थापना संस्थान बढ्नको लागि धेरै सौर्य गल्ती गरेको छु। म तपाईलाई म भन्दा धेरै छिटो सिक्ने वक्र प्राप्त गर्न मद्दत गर्न चाहन्छु र त्यसैले नै हामीले चरण सौर स्थापना स्थापना गरेर […]
सौर प्यानल स्थापना DIY ट्यूटोरियल!
यो भिडियो कंक्रीट छतमा सौर प्यानल स्थापनाको निर्देशात्मक DIY ट्यूटोरियलमा हाम्रो श्रृंखलाको पहिलो हो। यो ट्यूटोरियल नवीकरणीय उर्जा स्थापनाकर्ताहरू र घर मालिक जसले उनीहरूको आफ्नै सानो प्रणाली स्थापना गर्नमा रुचि राख्छन्। यसले कसरी देखाउँछ हामी कसरी एल्युमिनियम रेल माउन्ट गर्‍यौं, तारहरू जोड्दछौं, कम्बीनर बक्सलाई, र दियो […]
KB नवीकरणीय रोबोटिक्स क्याम्प २०१ 2016
किम्रोय बेली रोबोटिक्स र टेक्नोलोजी विश्वविद्यालय, जमैकाले लक्षित विज्ञान, रोबोटिक्स र नवीकरणीय उर्जा ग्रीष्म शिविर प्रस्तुत गर्न साझेदारी गरेका छन्। हाम्रो नवीकरणीय रोबोटिक्स शिविरको पहिलो हप्ता कभर: कसरी मोबाइल रोबोट निर्माण गर्ने, प्रोग्रामिंग, थ्रीडी प्रिन्टि Mobile, मोबाइल अनुप्रयोग निर्माण र नवीकरणीय उर्जाको परिचय। शिविरको दोस्रो हप्ता […]
नवीकरणीय ऊर्जा र रोबोटिक्स अर्थव्यवस्था वृद्धि गर्न
नवीकरणीय उर्जा र रोबोटिक्सले जमैकाको अर्थव्यवस्थामा उल्लेखनीय वृद्धि गर्न सक्दछ। 0० बर्षको मात्र ०-१% वृद्धिले युवा बुद्धिजीवीहरूको ठूलो बसाई अन्य देशहरूमा काम गर्न र तिनीहरूको अर्थव्यवस्था बनाउन बाध्य पारेको छ। यस लेखले जमैकाका नेताहरूलाई नवीकरणीय उर्जा र रोबोटिकको पछि लाग्न चुनौती दिन्छ जुन हाम्रो फिर्तीमा सक्षम हुने महत्वपूर्ण आर्थिक बृद्धि गर्न […]
किम्रोय बेली नवीकरणीय रोबोटिक्स समर क्याम्प
किम्रोय बेली रोबोटिक्स र टेक्नोलोजी विश्वविद्यालय, जमैकाले लक्षित विज्ञान, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरि। र गणित (एसटीईएम) समर क्याम्प प्रस्तुत गर्न साझेदार गरेका छन्। किम्रोय बेली नवीकरणीय रोबोटिक्स समर क्याम्पलाई वैज्ञानिक अनुसन्धान परिषद र GENNEX द्वारा समर्थित छ; विज्ञान, टेक्नोलोजी र इनोभेसन (एसटीआई) को क्षेत्रमा आकर्षकहरूको प्रयोग गरेर विद्यार्थीहरूको जोशलाई क्रान्तिकारी गर्न डिजाइन गरिएको […]
२०१ 2014 एकदम राम्रो वर्ष थियो! समय साँच्चै उड्छ। वर्ष किम्रोय बेली फाउन्डेशनले ट्रेलानीमा १००% नवीकरणीय सामुदायिक केन्द्रमा आफ्नो पहिलो परिचालन पवन टरबाइन स्थापना गर्‍यो। यस वर्ष किम्रोय बेली रोबोटिक्स जन्म र क्यारेबियाली अग्रणी रोबोटिक्स, उत्पाद प्रोटोटाइपिंग र सानो स्तरको निर्माण कम्पनीको रूपमा स्थित थियो। हम्म धेरै संख्याका माइलस्टोनहरू थिए […]
किम्रोय बेली रोबोटिक्सले जमैकन प्लानिंग इन्स्टिच्यूट (पीआईओजे) लेबर मार्केट फोरममा अत्याधुनिक जमैकन टेक्नोलोजीहरूको भव्य प्रदर्शन प्रदर्शन गरे। बुथले कम्पनीहरूले ड्युअल एक्सट्रुडर थ्रीडी प्रिन्टरहरू लगायत उन्नत प्रविधिहरूको होस्ट प्रस्तुत गरेका थिए; बेलीबायोनिकको स्न्यापशट: कम्पनीको मानव जस्तो रोबोट र बेलीबोटिक: कम्पनीको मोबाइल रोबोटको लाइन। बेलीबायोनिक एक रोबोट हो […]
रोबोटिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा र फार्मिंग टिभी फिचर
जमैकामा युवा सहभागिता अत्यधिक असमान रहन्छ। किशोरावस्थाको आवाज ठूलो मात्रामा निर्णय र नीति विकासबाट हराइरहेको छ। टक अप युट '- एम्प्रेज गोल्डिंग द्वारा आयोजना गरिएको राष्ट्रिय टेलिभिजन टॉक शो - अन्तिम परिणामको रूपमा समाधानको साथ युवा मानिसहरूलाई असर गर्ने मुद्दाहरूमा किशोर विचार साझा गर्न डिजाइन गरिएका केही प्लेटफर्महरू मध्ये एक हो। हेर्नुहोस् […]